Umagazini we-Beat Broadcast - NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, uMsasazo osasazisi we-NAB Bonisa - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Umbhali woLondolozo lweMbali: Ukupapashwa kweMagazini
Umbhali woLondolozo lweMbali: Ukupapashwa kweMagazini
NguPaul Richards, iGosa eliyiNtloko lokuSasaza, i-StreamGeeks ye-Olimpiki yegolide ye-Olimpiki uNadia Comăneci ukhe wathi: "Yonwabele uhambo kwaye uzame ukubangcono imihla ngemihla, kwaye ungalahli uthando nothando lwento oyenzayo." La mazwi ndijongane nam kuhambo lwam ukusungulwa kwe-StreamGeeks kwi2017. Nge-Novemba, i-StreamGeeks iza kubamba ...
I-IBC 2019: Ukuphawula amaBali amaVenkile eVisrt, iNewTek kunye ne-NDI Dibanisa
I-Bergen, eNorway - iVizrt, iNewTek ™ kunye ne-NDI® yiza kwi-IBC 2019 (yima 7.B01) phantsi kwembrela yeVizrt Iqela-ukudibanisa amabinzana amathathu okubhala amabali okuthengisa amabali phantsi kwenjongo enye-ukunceda abathengi ukuhambisa amabali ngakumbi, kuxelelwa ngcono. Iqela leVizrt leemveliso liza kwenza abathengi bakwazi kakuhle ukuntsokotha kwamabali abonakalayo kwaye bandise ubuchule babo. Kunye, ...
IziBonelelo zokuSebenzisa inethiwekhi yeMidiya yeHlabathi yoBomi obuPhezulu beXabiso
Ngeentengiso zemidlalo ephezulu yemidlalo ephilayo iba yinto yehlabathi jikelele, ukubaluleka kokudibana neqabane kunye nokufikelela okufikelelekayo kuya kuba yinto ebaluleke ngakumbi. Ngelixa imisitho yezemidlalo ephambili kwikhalenda ibisoloko iyipropathi yehlabathi, abanini-malungelo baqhubeka befumana iimfuno zelizwe kuwo onke amanqanaba ezemidlalo. Iqela kunye nemibutho iyakwazi ...
Ukusuka kuTim Baldwin, iNtloko yeMveliso, abathengi be-Zixi banamhlanje bafuna umxholo ezandleni zabo. Bafuna ukutya umxholo ngalo naliphi na ixesha, nakwesiphi na isixhobo, ezipakishwe ngeendlela ezanelisa iimfuno zabo kwaye zisiwe kwiindawo zokunyanzelisa amaxabiso. Iinkampani zemidiya ziyaqonda ukuba kufuneka zenze iinkqubo ezingakumbi eziya kwiindawo ezininzi, kwaye ukusasazwa kwe-IP yeyona ndlela ...
Iindlela zeTekhnoloji: Ukugcina / i-MAM
U-Namdev Lisman, uSekela-Mongameli oLawulayo, ukuGcinwa kwePrimestream ngumsebenzi wokubambelela kwizinto uze uzifune kwakhona, kwaye ngelixa oko kunokubonakala ngathi kukungaguquki kunye nokuhlala sisimo, enyanisweni kuyaphikisana. Umzi mveliso ugcina uyila kwaye abaqulunqi bemxholo bahlala beqhubela phambili ukuhanjiswa komsebenzi wabo. Isiphumo soko kukugcinwa kunye nento oyifunayo kuyo ...
Ukususa imingxunya ye-AR
NguPhil Ventre, uMdlalo weVP kunye nosasazo, uNcam Ngelixa lokwenyani lisasazekile lokwazisa lusekwinqanaba lokulinganisa, ukusetyenziswa kwalo ekugqibeleni kukusuka kwinqanaba 'lezinto ezintsha' zokudlala; Imizobo ye-AR iba yinxalenye yomxholo wenkqubo, kwaye abaphulaphuli abanobunkunkqele bafuna i-hyper-real, iigraphics ezinokukholeka ezintywiliselwe ngokupheleleyo kwimeko yenyani yehlabathi. Ezemidlalo ...
UPawulos Rodriguez 1952-2017
Umtshini wesigxina kunye nomphathi wezonyululwazi uPaul Rodriguez wadlulela uSeptemba 26th eLos Angeles yokuboshwa kwentliziyo emva kokubhedlelelwa esibhedlele. Wayengu 65. U-Rodriguez wayengumongameli weeNkonzo zeeNkcazo zaseSouth Lake kunye noMongameli weeNkonzo zoNcedo kunye noPhuhliso lwezoLonwabo kwiBurbank apho wayejongene nesandi sokwenza umsebenzi emva kweeprojekthi kuquka ne-HBO yaseWestworld. Kwakhona ...
I-InfinitySet i-3 ithola i-Newness Incredible Reality and Features. I-Brainstorm iza kuqalisa i-SmartSet, i-template-Based based Virtual Set and Isingeniso seNgeniso esingathandabuzekiyo I-Brainstorm, inkampani eneengcali ezinikezele ukubonelela i-3D iifayile kunye nezicwangciso zendlela ezenzileyo, eziswe kwi-NAB 2017 intuthuko ebalulekileyo kulo lonke uluhlu lwemveliso yalo, eyenzelwe ukuphucula Izixazululo ezingabonakaliyo kwiReality and Graphics. Ngenkampani engumlingani ayikho, ...
Bhoxisa kwaye ungalokothi ubeke iqela phezulu kwi-NAB ukuhambisa i-VisualMedia, isisombululo esidibeneyo senkxaso yangempela ye3D yokuboniswa kwezinto ezentlalo Ubungqina benkcubeko, inkampani ekhethekileyo yokubonelela nge-3D iifayile kunye nezisombululo ezizenzekelayo kwaye zingabikho, abavulindlela kwi-Social Social space, bayaziqhenya ngokuvakalisa i-VisualMedia, isisombululo esilungeleleneyo, esilungelelanisiweyo sokwenza umboniso wokubambisana nomxholo we-TV ...
I-SmartSet, i-template-based Augmented Reality kunye nee-Virtual Sets zabasasazi abancinci
Ukuqubuka kwengqondo kuzisa uluhlu olusebenzayo, oluphezulu lwephepha lesisombululo elungiselelwe izikhululo zeTV ezincinci nezasekhaya. I-Brain sefe, inkampani eyingcali ezinikezele ekuboneleleni ngemigca ekhokelela ngexesha langempela kwimifanekiso ye-3D kunye nezisombululo ezibekiweyo, eziziswe kwi-NAB uluhlu olutsha lwezisombululo ezisekwe kwitemplate ukufezekisa uluhlu lwayo olukhoyo kunye noluhambileyo lwe-Virtual Set, i-Augmented Reality kunye ne-Motion Graphics resolution . Iimveliso ezisekwe kwithemplethi zidlala ...
I-infinitySet 3-yenzelwe ukudala umxholo weNyani elinomdla
I-Brain sefe ixhobisa isisombululo sayo se-Virtual Set kunye ne-augmented Reality yesisombululo esinamandla nangakumbi nangamandla emizobo kunye ne-AR / VR isixhobo se-Brain sefe, inkampani eyingcali ezinikezele ngemveliso ekhokelela kwimizobo ye-3D yexesha-langempela kunye nezisombululo ezibekekileyo, ezibhengezwe kwi-NAB inguqulelo entsha ye-infinitySet, ibhaso leNzululwazi ye-Augmented kunye nesisombululo seSeti. Sele siqwalasele esona sisombululo siphezulu seMveliso yokuSeta eyiVenkile ...
URoger Ailes, uMongameli weendaba zeFox, uyafa
URoger Ailes, uMongameli we-Fox News, udlulile. I-Ailes yayinguvulindlela ekusasazeni, isebenzisa imali kaRupert Murdoch ukudala intanethi yeendaba ezo "kulungelelanisa" into ayekholelwa ukuba ibe ngamaza enkcazo yeendaba eziphathekayo kunye nendawo apho i-conservatives ingakwazi ukuguqula ubulungisa beendaba. Wayecinga ukuba isitshixo ekudaleni indawo "eya kuviwa" yayiku ...
2017 #NABShow - Usuku lwe-4 Wrap-up
NAMUHLA ngumhla wesine (kunye NOKUPHELEKILEYO) we-2017 NAB Show - kunye ne-WOW! YINTONI usuku lwAKUNYE !!! Olunye usuku oluvukileyo! Uyazi, bathi iHollywood yi "La La Land," kodwa xa uhlala kwi-NAB Show, ujikelezwe yizo zonke izixhobo kunye nabantu abaninzi abenza iLa La Land, kungenzeka ukuba le nto ivakalelwa yi-MORESO ...
2017 #NABShow - Usuku lwe-3 Wrap-up
NAMUHLA usuku lwe-THIRD lwe-2017 NAB Show - kunye ne-WOW! YINTONI usuku lwAKUNYE !!! 🙂 Utshutshiso lwabaSebenzi bekunomhla wokugqibela we-Show of yesterday Show, kwaye ngosuku lwesithathu ngokuqinisekileyo luyamnandi! Umboniso uhamba NGOKUSEBENZA, kwaye abasebenzi bethu benza umsebenzi OTHANDISAYO - bancedisa kakhulu ukuvumela ukuba sifumane ...
Ukuba asixeli i-2017 NAB Bonisa ama-After-Parties, siza kushiya i-chunk enkulu yokuzonwabisa ehambelana ne-NAB Show! Khangela ngaphantsi uze uqakraze kwi-NAB Bonisa iinkcukacha zenkcazo ngolwazi olungakumbi, njengokuba abanye bebodwa, ngesimemo kuphela okanye bane-admission fee. Olu luhlu olufanelekileyo kunye nolona luhlu olupheleleyo oluya kufumana! Si ...